Amjaajjota: Asoosama Gabaabaa Gamteessaa Sabaatin | Fighting for Freedom and Equality
Amjaajjota: Asoosama Gabaabaa Gamteessaa Sabaatin
Posted by Gishe Abdi Wako on September 9, 2013
Yeroo hundaa abbaan maasaa ganama ganama midhaan ilaaluu maasaa dhaqa. Hennaa ilaaluu midhaan kama nyaatame arga. “Maalumatu nyaata midhaan kiyya?” jedha kophaa ofiititti. Guyyaa lammataallee yoo deebi’ee ilaalu waan isa nyaatu hin argu garuu midhaanuma nyaatame arga. “Amajaajjii kamtu midhaan kiyya nyaata?” jedhee karaa itti baasuu jalqabe. Erga karaa itti baasee geessee booda akkana jedhee yaade “Hiddatti muree kuffisee kan nyaatu jeedala” jedhee biraa gale. Bariisaa yoo deebi’ee ilaalu:-
Fixeensa keessa deemuu hin xaaru.”
Jetteet abbaa maasaa galatoomfataa karama inni irra deemaa hamjaajjota too’achuuf fayyadamu irratti kuffiftee nyaatte ammas hin saalfattuu! Guyyaa biraa ammo “Maasaa kiyya waan isa nyaatu argee mirkaneessu malee hirriba hin argadhu!” jedheet arguudhaaf murate. “Amjaajjiin midhaan yoo nyaattu muka wajjiin kuffiftu tami tan muka osoo hin kuffisin dhaabatatti cabsattu hoo tami?” jedhee namoota firaa gaafate. Namoonnillee “Dhaddeenis inuma cabsiti garuu kan muka waliin kuffisu jeedala” jedhaniin.
Erga sakkarri hamnaatee oo’ifatanii dhaddeen aartee jeedala qoree itti kaafte “Maasaa koo keessa bayi” jetten. Achamaan jeedaalli “Dhaddiyyoo waan ati jettu haalaf siin jedhe male miidhaa keetif hin jenne” jette araarfachuuf waan qalbii qabduf. Dhaddeellen “ Ati yero duraa na gowwoomisitee ufii keetif kophaan boqqoolloo nyaachoo barbaaddee turte garuu hin dandunne” jetteen. Isaanis akkanatti maasii abbaa qabu nyaatanii irraatti seekkaran; seekkaraas bulanii itti bariinaan adda bayan
← Seera Hibboo
Perzdaanti Obaamaan Siiriyaa ‘Adabuun’ Duratti Qaraa Akka Falii Raashiyaa Hojjatu Laaluu Fedha →